ऊर्जा सचिव अनुपकुमारले किन दिए राजीनामा ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
ऊर्जा सचिव अनुपकुमारले किन दिए राजीनामा ?
काठमाडौं, मङ्सिर २०। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन राजीनमा दिएको जनाइएको छ । नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन गर्ने समय सकिनै लागेको बेला सचिव उपाध्यायले राजीनामा दिनुभएको समाचार कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
त्यस्तै, सरकारले भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा भारतलाई दिने तयारी थालेको छ । भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन ६९ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्गमध्य धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न तयारी भएको समाचार छ ।
विश्व बैँकले ‘डुइङ बिजनेस इनडेक्स’मा नेपालको अवस्था खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका बेला मुलुकको औद्यौगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘श्रम लागत’ एकैपटक बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको भार बेहोरेका लागनीकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएसँगै अतिरित्त, भार बेहोनु परेको समाचार पनि छ ।